Krita 4.4.2 inosvika uye inoramba ichiwedzera maturusi, mafirita uye nekuvandudza kwakasiyana | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwaGumiguru, KDE yakakanda v4.4.0 ye software yayo yakagadzirirwa nevevanoita zvemifananidzo. Sekuvandudza kukuru, kana neshanduko kune yekutanga decimal nzvimbo, yakaunza anozivikanwa maficha maficha senge rutsigiro rweDisney's SeExpr. Vakazoburitsa yekugadzirisa yekuvandudza kuti ivandudze nhevedzano, uye nhasi Ndira 19 ivo vaparura Krita 4.4.2, nyaya nyowani yepfungwa iyo, pasina kuve kuvhurwa kukuru, inosanganisira akawanda maficha, kunyanya kugadzirisa zvikanganiso.
Mutsamba yekuburitsa vanoitsanangura, iyo yavakaunza zvinopfuura makumi matatu neshanduko uye kuti, kune zvambotaurwa, vakawedzera mabasa matsva. Semazuva ese muKrita, uye kusiyana neGIMP, semuenzaniso, KDE inotora mukana kuburitswa kutsva kuunza maturusi matsva, pakati pazvo isu tine mabhurasho. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kunaka nhau dzakasvika neKrita 4.4.2.
Krita 4.4.2 yakakwira
Iyo nyowani, yakamira yega SVG kuitiswa kweMesh Gradients.
Nyowani Mesh Shanduko chishandiso, chine Bézier zvigamba zvinogona kuumbwa zvakasiyana kuti zvigadzire chaiwo shanduko, kunyanya inobatsira pazvinhu zvakakomberedzwa.
Rudzi rutsva rwe gradient kuzadza dura, iyi ichaita kuti zvive nyore kukurumidza kugadzira akasiyana gradients asiri ekuparadza.
Yakavandudza halftone firita.
Iwo macOS ekubatanidza plugins akagadziridzwa.
Chiito chekunamatira chimiro chimiro.
Bhatani rebhatani renzira yakatenderedza.
Bug inogadzirisa mune zvishoma zvese.
Kuburitswa kwaKrita 4.4.2 zviri pamutemo, asi izvozvi zvinongowanikwa chete kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti nenzira yeAppImage (bato rakananga). Kubva pawebsite yeprojekti ivo vanotiudzawo nzira yekuwedzera repodhi yeUbuntu-based operating system, yeGento, uye vanotiudza nezve mukana wekuisa iyo Flatpak vhezheni, asi haisati yavapo muFlathub. Ivo havataure iyo Snap vhezheni, fomati umo isu tinogona zvakare kuiisa, asi ichave kana ivo pavachaisa iyo nyowani vhezheni, iyo ichaitika mumazuva mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Krita 4.4.2 inosvika uye inoramba ichiwedzera maturusi, mafirita uye nekuvandudza kwakasiyana